OnePlus သည်အသုံးပြုသူများထံမှတိကျသောအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲစုဆောင်းသည် Gadget သတင်း
ယူကေအခြေစိုက်လုံခြုံရေးနှင့်နည်းပညာဘလော့ပိုင်ရှင် Chris Moore က OnePlus သည်သုံးစွဲသူများထံမှတိကျသောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေသည်ဟုပြောသည် သင့်ဖုန်းများ၏ IMEI၊ MAC လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အခြား သူတို့ရဲ့အမြန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။
သို့သော်ယခုအခါတွင် OnePlus ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အရှုပ်တော်ပုံမဟုတ်ပါ၊ ငါယုံကြည်စိတ်ချရှင်းပြချက်ပေးကြောင်းခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်လာသည်.
1 OnePlus ပေါ်လစီဖြစ်ပုံရသည်၊ ၄ င်းတို့၏ privacy ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်
1.1 အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်မရပဲ OnePlus သည်မည်သည့်ဒေတာကိုကောက်ယူသနည်း။
2 ထိုအခါအငြင်းပွားမှု OnePlus အဘယ်သို့ထင်သနည်း
OnePlus ပေါ်လစီဖြစ်ပုံရသည်၊ ၄ င်းတို့၏ privacy ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်
ယခင်က OnePlus သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျပ်အတည်းများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားလုံလောက်သောပံ့ပိုးမှုမပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် OnePlus5အစီရင်ခံစာများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အခြေခံစံနှုန်းများ၊ ညံ့ဖျင်းသောဖန်သားပြင်များနှင့်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဖုန်းခေါ် ဆို၍ မရသောအသုံးပြုသူများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအကြောင်းပြောသောအစီရင်ခံစာများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, ယခုယခင်ထက်ပို။ ပင်လေးနက်အကျပ်အတည်းလာနှင့်အရာမတိုင်မီ အသုံးပြုသူများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအရေးတကြီးရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်.
ယူကေရှိလုံခြုံရေးနှင့်နည်းပညာဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင် Chris Moore ကတင်ပြခဲ့သည် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့လာလိမ့်မယ် OnePlus သည်အသုံးပြုသူများထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲထုတ်လွှင့်သည်.
အသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်မရပဲ OnePlus သည်မည်သည့်ဒေတာကိုကောက်ယူသနည်း။
Moore ရှိရာ SANS Holiday Hack Challenge ပွဲတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အမည်မသိဒိုမိန်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာကဆနျးစစျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ open.oneplus.net သည်ထိုဒိုမိန်းကိုလုပ်ခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် သင့်စက်ပစ္စည်းမှသုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီး Amazon AWS ဥပမာသို့လွှဲပြောင်းပါအားလုံးသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။
OnePlus ရယူသောဒေတာများထဲတွင်ရှိပါတယ် device ကိုသူ့ဟာသူ၏သတင်းအချက်အလက်ကနေ IMEI ကုဒ်နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ MAC လိပ်စာ၊ မိုဘိုင်းကွန်ယက်အမည်၊ IMSI ရှေ့ဆက်နှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် ESSID နှင့် BSSID စသည့် အသုံးပြုသူဒေတာရန် reboots, load, flags, app usages စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
Moore ၏အဆိုအရဤအချက်အလက်ကောက်ယူရန်တာဝန်ရှိသည့်ကုဒ်သည် OnePlus Device Manager နှင့် OnePlus Device Manager Provider ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ Jakub Czekanski က system service ဖြစ်သော်လည်း၊ net.oneplus.odm အား ADB မှတစ်ဆင့် pkg အတွက်အစားထိုးခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ pm uninstall -k -user0pkg ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ထိုအခါအငြင်းပွားမှု OnePlus အဘယ်သို့ထင်သနည်း
ကောင်းပြီ၊ အခြေခံအားဖြင့်တော့ "ချော်ခြင်း" ထက် ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ OnePlus ဟာ Android မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်သုံးစွဲသူအခြေစိုက်စခန်းရှိပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများလုပ်ခြင်း၏သဘောသဘာဝအရအလေးအနက်ထားသည်။ ထိခိုက်လူများ၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမို။ ဒါပေမယ့်ပို။ ပင်စိုးရိမ်ပူပန် OnePlus ကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်လို့မထင်ရ။ Chris Moore ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Android Authority မှအကြံပေးသည့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများနှင့်ပတ်သတ်သည့်မေးခွန်းများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတုံ့ပြန်ဘဲစုဆောင်းထားသောဒေတာသည်သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်အားအထောက်အပံ့အဖြစ်ရည်ရွယ်ကြောင်းဖော်ပြရန်ကန့်သတ်ထားသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကို HTTPS မှတစ်ဆင့်အမေဇုန်ဆာဗာသို့မတူညီသောစီးဆင်းမှုနှစ်ခုဖြင့်လုံခြုံစွာပို့လွှတ်သည် ပထမစီးဆင်းမှုသည်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအပြုအမူနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုပိုမိုတိကျစွာချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ ဤအသုံးပြုမှုလှုပ်ရှားမှုစီးဆင်းမှုကို 'Settings' -> 'Advanced' -> 'User experience program' သို့သွားခြင်းအားဖြင့်ပိတ်နိုင်သည်။ ဒုတိယစီးဆင်းမှုသည်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းပြီးသွားသောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်
Android Authority မှ Brian Reigh က၎င်းတို့သည် OnePlus ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး နှင့်လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ “ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အနာဂတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဒေတာများကိုမျှဝေရန်ဝင်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ကိုဘာကြောင့်ခွင့်မပြုတာလဲဆိုတာကိုကျေနပ်လောက်တဲ့ရှင်းပြချက်မရရှိခဲ့ပါ »။ ဆက်ပြီးအဆိုပါအမြီးအမောက် ဤနေရာတွင် OnePlus သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော After-sales service ကိုပေးရန်၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုချိုးဖောက်နေသည်။ ထုတ်လုပ်သူများအနက်သုံးစွဲသူများစွာကိုဒေါသနှင့်စိတ်ပျက်အောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီသည်ရောင်းအားလွန်ပြီးသည့်အထောက်အပံ့မရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအချက်အလက်ကောက်ယူမှုကိုတရား ၀ င်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုခြင်းအားဖြင့်တရားမျှတရန်ကြိုးစားနေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » OnePlus သည်အသုံးပြုသူများထံမှတိကျသောအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲစုဆောင်းသည်
Chrome for Adblock Plus ဟုခေါ်သောတိုးချဲ့မှုအတုသည် Web Chrome စတိုးသို့ရောက်သည်
ဆမ်ဆောင်းသည် Darth Vader နှင့်တူညီသည့်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်